हर असम्भवलाई सम्भव बनाउँदैं चीन ! हावा र पानीमा चल्ने विश्वकैं ठुलो जहाज (तस्विरहरु हेर्नुहोस)
बेइजिङ । हर असम्भवलाई सम्भव बनाउँन अहिले चीन लागि परेको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो विमान एजी ६०० को झांगेन जलाशयमा सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । चीनमा पानी र आकाशमा उड्ने क्षमता भएको यो समुद्री विमान मात्र चीनमा विकसित गरिएको छ। चीन एविएशन इंडस्ट्री जनरल एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड (सीएआईजीए) का अनुसार, सोमवार एजी ६०० […]
काठमाडौं । पर्यटन विभागले १४ वर्षअघि बिना आधार पेम्बादोर्जी शेर्पालाई सगरमाथाको स्पीड आरोहण गरेको भनी थमाएको प्रमाणपत्र गलत भएको स्वीकार गरेको छ । बिना आधार दिइएको प्रमाणपत्र विभागले रद्द गर्दै स्पीड आरोही ल्हाक्पागेलु शेर्पालाई नै सदर मानेको हो । -विश्वकीर्तिमानी स्पीड आरोही सोलुखुम्बुका ल्हाक्पा गेलु शेर्पा (बायाँ) र नक्कली स्पीड आरोही बनेका दोलखाका पेम्वादोर्जे शेर्पा प्रमाणपत्रसहित […]
१०० नं मा फोन गरेर प्रहरीलाई गाली गर्ने, झुटो खबर दिने र धम्की दिने पक्राउ
२५ कार्तिक, बाजुरा- १०० नं मा फोन गरेर गलत सूचना दिने बाजुरा मार्तडीका वीरेन्द्र रावललाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । शुरुमा आफैँ फोन गरेर गलत सूचना दिने र प्रहरी नपुगेको भन्दै गाली गर्ने गरेको प्रमाणका आधारमा रावललाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले जानकारी दिनुभएको छ । प्रहरीले जनसेवाका लागि टोल फ्रि नं […]
२५ कार्तिक,जनकपुरधाम– हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको प्रमुख पर्वमध्येको एक छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने छठ पर्व मनाउन तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा तयारी थालिएको देखिन्छ। मिथिलाञ्चलबासीको महत्वपूर्ण पर्व छठ मनाउन जनकपुरसँगै विभिन्न जिल्लाहरुमा किनमेल गर्ने, पोखरी सफा गर्ने तथा घाट सजाउने काम भइरहेको छ। यस्तै, कठोर पर्वको […]
काठमाडौं, २५ कार्तिक । कृति प्रति कृतज्ञता र आराध्यदेव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि आज देखि सुरू हुँदैछ । मुख्य विधिअन्तर्गत पहिलो दिन (चतुर्थी) को विधिमा अरबा–अरबाइन गरिन्छ, जसलाई नहाय–खाय पनि भन्ने गरिएको छ । दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने विधि गरिन्छ । यस […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,कभर स्टोरी / फिचर,मुख्य समाचार,समाज Read More »
डोरमणिले स्थापितलाई गरे विस्थापित
काठमाडौं, १६ कार्तिक । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई पदबाट हटाएका छन् । उनको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नदेखिएको विषयमा छलफल हुँदा स्थापित र पौडेलबीच मन्त्रिपरिषद बैठकमा चर्चाचर्की भएको थियो । पौडैलले सविधानको धारा १६९ को उपधारा २ को खण्ड क अनुसार स्थापितको कार्यशैली, अमर्यादित व्यवहार र उनी नेतृत्वको मन्त्रालयको […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,कभर स्टोरी / फिचर,मुख्य समाचार,राजनीति मुख्य Read More »
तिहारमा यति धेरै तासको खपत ?
काठमाडौं, १६ कार्तिक । तास खेल्ने पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा यसको आयात धेरै भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि तासको खपत धेरै थियो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८ करोड ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको ५१ लाख ९३ हजार ८ सय प्याकेट तास आयात भएको छ। सबैभन्दा धेरै तास असोजमा […]
शरीरमा २२ लाख रुपैयाँ लुकाएर बसमा सवार एक व्यक्ति पक्राउ !
काठमाडौं, १६ कार्तिक । शरीरमा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लुकाएर बसमा सवार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । स्रोत नखुलेको रकमसहित एक जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नागढुंगाको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४ सल्यानीवाग बस्ने मोहम्मद हसीव सिद्दिकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ३६ वर्षीय हसिवलाई प्रहरी निरीक्षक केशवराज भट्टको […]
ढलले ज्यान लियो
काठमाडौं, १० कार्तिक । काठमाडौँको बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुलगेट नजिकै ढलमा खसेर आज बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ । साइकलमा सवार काठमाडौँ महानगरपालिका– १५ चागलका श्याम श्रेष्ठको मृत्य भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले जनाएको छ । शनिबार बिहान साइकलमा सवार श्रेष्ठ खाल्डोमा खसेपछि निस्कन नसकेर निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त […]
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारमध्ये पर्यटन क्षेत्रलाई पनि एउटा आधारको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगलगायतका क्षेत्र सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने माध्यम हुन् । जतिसक्दो धेरै पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हो तर सोही अनुसार पूर्वाधार विकासमा सरकार अघि नबढ्दा अबको डेढ वर्षपछि सन् […]